Oliiqaa Dingil eenyyu? (Kutaa 2ffaafi isa xumuraaa) -
Oliiqaa Dingil eenyyu? (Kutaa 2ffaafi isa xumuraaa)
Yeroo yerootti uffata waraana Xaaliyaanii uffatee Dambii Dolloo seenuudhaan mana Aadde Moominaafi Aadde Daasharee Akkayyuutii daadhii dhugee, odeeffannoo barbaachisus walitti qabatee deebi’aa ture. Namoota isa fakkaatan waliinis dhoksaatti ni mariyata ture. Deggartoota Oliiqaa gocha weerartoonniifi jalaa kaattuun warrasaaniirratti raawwatan namoota hedduu aarsee tureera. Haala kanatti aaree kan garaa kutate Oliiqaa duukaa shaffata, warri kuun immoo, naannoodhuma jiran taa’anii deggaraa turan. Daggarsi kennamaa tures, odeeffannoo kennuu, galaa qopheessanii nyaachisuu, meeshaa waraanaa kaa’uufi erguu dabalata.
Hayyoonni Oromoofi qaamni dhimmichi kallattiidhaan ilaallatu dhimmoota akkanaarratti xiyeeffatanii hojjechuu qabu. Gara fuulduraattis seenaa gootota biroo isin dubbisiisuuf ni yaalla.
Isinis yaada keessanis ta’e waantota dubbistoota biroo akka qaqqabu barbaaddan karaa teessoo fb nuu erguudhaan hirmaadhaa.
Previous EE BARA SAN !!
Next Barattootni Oromoo Walga’iin Wayyaanee nu hin ilaallatu jedhu